TÜBİTAK wuxuu shaqaalaysiin doonaa shaqaalaha | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaTÜBİTAK wuxuu shaqaalaysiin doonaa shaqaale
tubitak wuxuu shaqaalaysiin doonaa shaqaalaha
TÜBİTAK wuxuu shaqaalaysiin doonaa shaqaale; Head of Sayniska iyo Golaha tignoolojiga Research of Turkey (TUBITAK) ayaa sii daayay xayeysiiska shaqaalaha xubin cusub. Gobolka Kocaeli, shaqaalaha shahaadada koowaad ee ka qalin jabisay ayaa la shaqaaleysiin doonaa.
TÜBİTAK ayaa daabacay ogeysiis cusub laga soo bilaabo bishii Diseembar. Sida ku xusan ogeysiiska lagu daabacay gobolka Kocaeli ee loogu talagalay TÜBİTAK BİLGEM 2 dadka waxaa lagu iibsan doonaa shaqaale banaan. Musharixiinta waa inay lahaadaan aqoonsiyo cayiman kahor intaysan dalban.
NIDAAMKA CODSIGU SAMEEYA!
Turkey Sayniska iyo Hay'adda Cilmi Baarista tignoolojiga biis iyo Information Security Advanced Technologies bilaabay habka codsiga askaraynta Xarunta Cilmi. Murashaxiinta waxaa looga baahan yahay inay soo gudbiyaan codsiyadooda ugu dambeysa 27 Diseembar 2019 ugu dambeyn. Codsiyada waxaa lagu sameeyaa cinwaanka rasmiga ah ee TÜBİTAK, Nidaamka Codsiga (kariyer.sage.tubitak.gov.t waa).
a) Si aad u dalbato xayeysiinta İlanwww.bilgem.tubitak.gov.t waaWaxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso Nidaamka Codsiga Shaqada. (Markaad samaynaysid CV-ga dalabka, dhammaan dukumiintiyada loo baahan yahay waa in lagu daro nidaamka si elektiroonig ah codsina waa in lagu sameeyaa xulashada koodhka tixraaca). Marka laga reebo dalabyada loo maro Nidaamka Codsiga Shaqada
dalabka lama aqbali doono.
b) Codsiyada waa in la soo gudbiyaa ugu dambeyn 27 / 12 / 2019: 17: 00.
d) Wareysiyada musharraxiinta waxaa loogu yeeri doonaa kala-duwanaanshaha 10 tirada shaqaalaha ee la sameyn doono laga bilaabo natiijada ugu sareysa iyadoo la raacayo (e) qeybta shuruudaha guud ee Koşullar ee lagu raadinayo Murashaxiinta ”. Sida ku cad (f) qaybta shuruudaha guud ee Koşullar ee lagu raadinayo musharixiinta p, kana mid ah musharixiinta shahaadada PhD ka qaadanaya goobta,
Intaa waxaa dheer, 10 jeer tirada shaqaalaha ee loo qoondeyn doono darajada waxaa lagu casuumi doonaa wareysiga. Haddii ay jiraan murashixiin kale oo leh isla dhibco kuwii musharrixiinta ugu dambeeya, waxaa sidoo kale loogu yeeri doonaa wareysiga.
e) Qodobka (e) ee Xaaladaha Guud ee Koşullar ee Loo Raadin Karo Musharixiinta, Murashaxiinta dhameystay waxbarashadooda heerka koowaad ee dibedda, iyo (e) iyo (f) Xaaladaha Guud ee Guud ee Loogu Raadin Karo Musharixiinta Doktora ee loogu talagalay codsadayaasha dhameystay Ph.D. murashaxiinta sidoo kale waa la qiimeyn doonaa.
f) Murashaxiinta waxaa loo qiimeyn doonaa iyadoo la raacayo caddeynta ay ku soo galeen nidaamka arjiga shaqada inta ay ku gudajiraan codsiyadooda,
Qorista Shaqaalaha ee TUBITAK